Posted: Adoolessa/July 14, 2013 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments
Kana hunda TPLF kan raawwachaa jiru, Oromoo hooggana dhabsiisuun kan itti milkahee dha. ummata Oromoo fi oromiyaa dadhabsiisuu keessatti sirnooti nafxanyaa fi TPLF tumsa tokkoon hojachaa jiru. Kanaaf Oromoon haalli keessa jirru eddu suukaneessaa dha. dubbiin dubbii boruuf jedhan miti. Haalli harkaa nuqabu, haalaan jajabduu dha. atakaaroo fi siyaasa booddessaa keessaa baanee egeree keenyaaf kan ta’u yaaduun murteessaa dha. kan boru hojannu boruuf bulfannee kan ardhaa irratti xiyyeeffachuu qabna. Abjuu fi miiraan dhiibamnee wal dhiibuu keessaa baahuu qabna. Haalli amma keessa jirru yeroo Bilisummaa, Walabummaa, Birmadummaa, dimokraasummaa, itiyoophummaa jennee atakaroo wal qabnu natti hin fakkaatu. Yeroon isaa yeroo akka sabaatti dhabamuuf deemnu waan ta’eef dhimma oromummaa irratti waliin hojachuu, tumsa waliif ta’uu, kan kaleessaa irraa barannee kan boruuf waliin hojachuu, ilaa fi ilaameen wal dhagahuu qabnuu dha. mooraa qabsoo Oromoo tasgabbeessuuf hoogganni jiru bilchinaan yaaduu gaafata. Siyaasa “karaa cabeen haa yaasa” jedhu keessaa bahuun yeroon isaa amma natti fakkaata. Atakaaroon siyaasaa, mooraa qabsoo Oromoo keessaa qabbanaahuu qaba. haalli keessa jirru murnaaf, naannoof, gosaaf, ………… yeroo itti yaadnee maqaa qabsootiin kakannu natti hin fakkaatu. Hundee eenyummaa keenyaatti dadhabbina keenya irraa kan madde haala suukanneessaatu as deemaa jira.
Akka amma argaa jirrutti, nama lamas ta’anii sadiis ykn dhibbaa fi kumas ta’anii dhaaba siyaasaa dhaabbachuun, olala walirratti oofuun, marsaa intarneetaa dhuma hin qabne banachuun, raadiyoo maqaa gara garaa qabu garuu kan rakkoo qabsoo Oromoof fala tokko illee hin akeekne baayyifachuun, maqaa gara garaatiin qabsoo Oromoo moggaafachuu……. Kkf yeroo ammaa kennaa teknologii ta’ee jira. Kun baayyachuun ammeenya miti. Garuu fafa kan ta’ee jiru hundi isaaniituu haqa lafarra jiru wal akeekuu irra, haqa aguuguu irratti xiyyeefachuu isaanii ti. Haala kana keessaa bahuun murteessaa dha. haalli kun uumamuun isaa humna mooraa qabsoo keenyaa akka malee dadhabsiisee jira. diinaaf ammoo madda jireenyaa ta’ee jira. fafi kana caalu hin jiru. Diinni keenya akka dhaadannooti kan qabatee jiruu fi nutis gargaaraa jirru “Oromoon tasa tokko ta’uu hin danda’u, akka salphaatti walirraa fageessuun ni danda’ama” jecha jedhu dhugoomsaa jirra. Kun haqa lafa jiruu dha. tarii namootiin ykn gareen tokko tokko haqa lafa jiru kana fudhachuuf ni rakkatu ta’a. ykn rakkoo kana kan dhalche “ebelu, garee akkanaati, duri jennee turre, otoo ebelu jiraachuu baatee, ……” jedhanii quba namatti qabuu malu. Garuu abbaan rakkoo kanaa hunda keenya. Ani qulqulluudha kan jedhu tarii rakkoolee dhalataniif madda guddaa ta’ee argamuu mala. Kanaaf rakkoon kun kan hunda keenyaa eega ta’ee falli mana hunda keenyaa jira. falli isaa ammoo haqa lafa jiru kana of amansiisuu dha. rakkoon jiraachuu fi qaama rakkoo kanaa ta’uu keenya hundi keenya of amansiisuu dandeenyaan, falli mana keenya hundaa waanta burquuf yeroo gabaabaa keessatti qabsoo keenya furgaasuu dandeenya. Fala rakkoo nama dhuunfaa ykn garee biraa irraa kana eegnu ykn abbaa rakkoo nama dhuunfaa ykn garee tokko goonee kan hubannu yoo ta’e, ammas dammaqaa hin jirru.